Iinkqubo ezi-5 zoopopayi ze-android kunye neeos
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Zoba iikhathuni kwaye wenze imiboniso bhanyabhanya oopopayi ngezi zixhobo zi-5 zoopopayi ze-Android kunye ne-iOS
Zoba iikhathuni kwaye wenze imiboniso bhanyabhanya oopopayi ngezi zixhobo zi-5 zoopopayi ze-Android kunye ne-iOS
Wakha wafuna ukukhupha iWalt Disney yakho yangaphakathi? Ngoku unako, enkosi kumandla efowuni yakho okanye ithebhulethi. Nokuba awunasiphiwo, awungekhe uze nento ekhangeleka intle xa ushukuma! Iiapps ezintlanu esizijikelezileyo ngezantsi zibandakanya ukhetho lwenkululeko lwezixhobo zokuzoba, oopopayi abenziwe kwangaphambili okanye iiasethi, nazo zonke iindlela zokwenza inzuzo ngazo. Abanye bade baxhase igalelo elivela koonobumba abanoxinzelelo koxinzelelo njenge-Samsung S-Pen okanye iPensile ye-Apple, ebonelela ngamava okwenene okuzoba.
Yintoni ngakumbi, indalo yakho inokukhutshelwa ngaphandle ngokulula kwiifomathi ezahlukeneyo, kubandakanya oopopayi be-GIF kunye neemovie ezilungele ukwabelwana kwiiakhawunti zenethiwekhi yakho. Ke bamba naluphi na olu setyenziso kwaye unike ingcinga yakho ngokuzilolonga ekunokwenzeka ukuba awuzange ubenako ukusukela usengumntwana!
I-RA sisicelo sopopayi esenziwe ngesandla esinoluhlu olubanzi lweempawu, ezinje ngemingcele engenamda, isikhumba se-anyanisi, i-audio-syncing audio, i-rotoscoping, iibrashi zesiko, kunye nokukhetha ukuthumela umsebenzi wakho kwiAdobe Flash okanye emva kweZiphumo.
Khuphela i I-Android okanye ios
Intsomi imalunga nokuguqula isicatshulwa sibe ziividiyo zemizuzwana emi-6 okanye ii-GIF zoopopayi ngenkqubo elula. Umbhalo ngamnye woopopayi uyilelwe ngabaqulunqi bentshukumo yobungcali kwaye unikezela ngamakhulu okudityaniswa kwetypography, oopopayi, imvelaphi kunye nemibala oza kudlala nayo. Nge-app, unokongeza kwaye unciphise ifoto okanye ividiyo kwimvelaphi, khangela imifanekiso yangemuva kwiFlickr, gcina iividiyo (okanye ii-GIFs zoopopayi) kwiThala leeNcwadi, thumela imifanekiso ye-GIF kwiincoko zemiyalezo, kwaye wabelane ngeevidiyo kuthungelwano lwentlalo. Umbhalo oopopayi unokufikelela kubalinganiswa abali-100 ubude kunye nee-slo-mo iividiyo / amaxesha amade anokusebenza njengemvelaphi.
NgeLyan 3D, oopopayi be3D kwi-smartphone yakho iba lula kwaye inomdla. Unokwenza i-movie ye-3D-animated, i-documentary, okanye i-cartoon ngaphandle kolwazi lwangaphambili lwenkqubo, olubandakanya ukungenisa izinto, ukuphilisa isakhelo ngasinye, ukubeka iikhamera kunye nezibane, kunye nokuthumela umphumo ogqityiweyo. Uhlelo lokusebenza lubandakanya ukulandelelana okwenziweyo okwenziweyo kunye nefuthe. Ikwabonelela ngokungenisa imifanekiso kunye nevidiyo kwiialbham zeefoto zakho, kunye nokhetho lokongeza umbhalo we-3D.
Umenzi woopopayi HD
UMdali oopopayi HD umalunga nezinto ezilula, kodwa ezinamandla zokuzoba ubuchule bakho bangaphakathi. Ukhetho lwemibala kunye nolawulo lwesakhelo lukhawulelwe kuphela ngengcinga yakho, ngoku ekwaziyo ukwenza oopopayi abaqaqambileyo ngokudlala okuphezulu.
Khuphela i ios
IFlipaClip ikuvumela ukuba ubonise ubuchule bakho okanye izakhono zobugcisa ngokuzoba ikhathuni ngesakhelo kwaye ubandakanyeke kuko konke ukuzoba, ukubekwa kwamabali, kunye nokudlalisa. Insiza inamanqwanqwa, ixesha lokugcwala, umphathi wesakhelo, iseti yezixhobo zokudweba kunye nesixhobo sokubhaliweyo. Inokwakha iziphumo zakho njengeevidiyo zoopopayi kwaye wabelane ngazo kwinethiwekhi yoluntu. IFlipaClip ikwaxhasa igalelo lestylus kwi-Samsung S-Pen yendalo yendalo.
Khuphela i I-Android
itemplate yoxwebhu lovavanyo lweendlela ezikhawulezayo
Ngenisa urhwebo kwi-Best Buy kwaye uthenge i-Apple iPhone 5c nge $ 1, okanye i-Apple iPhone 5 ye $ 99.99
Idili: Ukuvulwa kweGoogle Pixel 3 XL 128 GB ngoku kungabizi kakhulu kunangaphambili (akukho mfuneko yokuvula)
Inkxaso ikhula ngegama leGalaxy Note 7; Ngaba iSamsung iyalitsiba inqaku 6?
Amaxabiso asezantsi wokuthenga i-Intel Core m3 eneSurface Pro 4 yenqwaba yeedola ze- $ 599 kuphela (40% icinyiwe)
IAmazon Cyber ​​yangoMvulo ijongana ngoku
UBose uqala ngentengiso yangoLwesihlanu oMnyama kwivenkile ekwi-Intanethi nakwiAmazon
Inokwenzeka i-iPhone 12 / Pro 5G kunye ne-Apple Watch Series 6 isibhengezo kunye nemihla yokukhutshwa kokuvuza
Ityala le-Otterbox Symmetry Series yovavanyo lwe-HTC One M8
UGoogle Fi wongeza ii-smartphones zeSamsung ekunikezeleni, utyhila imephu yokugubungela inethiwekhi ye5G
UKUHLAZIYWA: I-AT & T & amp; indawo ye-3G yeMicroCell iyasebenza kwaye iyasebenza